စာအုပ်အသစ်သည်လူကြိုက်များသောဆပ်ပြာအမှတ်တံဆိပ်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်
ဂါနာရှိ Serendipalm တွင်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး သည်မထွက်ခွာမီစွန်ပလွံသီးကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးသည် ၎င်း၏ဆီ။
ဒေါက်တာ Bronner's မှအထူးစစ်ဆင်ရေးဌာနအကြီးအကဲ Gero Leson သည်အဖွဲ့၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းကျော်ကြားသောဆပ်ပြာအမှတ်တံဆိပ်အတွက်မျှတပြီးအော်ဂဲနစ်ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်များ။ သူ၏စာအုပ်သစ်တွင်သူသည်အသစ်ပြန်လည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ခြင်း၏အတက်အကျများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်ကိုအသေးစိတ်မျှဝေသည်။ သီရိလင်္ကာ၊ ဂါနာနှင့်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိအုန်းသီး၊ စွန်ပလွံနှင့်သံလွင်ဆီတို့ကို၎င်းတို့မည်သို့ရရှိကြသည်ကိုကြည့်ရှုရန်နောက်ကွယ်မှနောက်ကွယ်မှကြည့်ရှုသူများအားပေးသည် - နှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးရန်စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်စဉ်များ၊ ကုမ္ပဏီ၏ဆပ်ပြာ၏ကျောရိုး။
Leson:၂၀၀၅ခုနှစ်မှာငါတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစလုပ်ကတည်းကသဘာဝထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှလူအများစုကကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြောင်းကျွန်မတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။။၁၂နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါစဉ်းစားမိသည်-ဤပုံပြင်သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များသာမကစားသုံးသူများကိုပါပြောသင့်သည်။ကုမ္ပဏီများကမည်သည့်အရာများကပြီးမြောက်နိုင်မည်ကိုလက်တွေ့ကျပြီးမကျေမနပ်သောခံစားချက်ကိုပေး၍အုပ်စုနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုရန်လှုံ့ဆော်ပေးသင့်သည်။ရူပါရုံကိုလိုက်ရန်။သဘာဝကျကျ၊ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဇာတ်လမ်း၏“ပေါ့ပါးသောဗားရှင်း”နှင့်မိသားစုနှင့်Bronnerအမှတ်တံဆိပ်၏ထူးခြားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြလိုခဲ့သည်။ငါအသက်အရွယ်သိတယ်"တံဆိပ်နောက်ကွယ်မှဇာတ်လမ်းကဘာလဲ" နှင့်ပတ်သက်။ စပ်စုနေသော ns? Chhabra: အခြားကုမ္ပဏီများသည်အလားတူထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ Leson : အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များမတည်ရှိပါကအော်ဂဲနစ်မျှတသောစိုက်ပျိုးရေးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Times ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ရာပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အော်ဂဲနစ်နှင့်မျှတသောကုန်သွယ်ရေးအရည်အသွေးတွင်ရရှိနိုင်ပြီး၊ အော်ဂဲနစ်ပြန်လည်ထူထောင်သည့်အနေနှင့်လည်းပိုမိုတိုးများလာသည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကငါတို့လုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုမလုပ်သင့်ဘူး။ ၎င်းတို့သည်လက်ရှိရင်းမြစ်များကိုသုတေသနပြုခြင်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊ ၄ င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အကြီးစားကုမ္ပဏီများသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ပမာဏများသောကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များအလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ သို့သော်လည်းသူတို့သည်လည်းဒေါက်တာ Bronner လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်ရန်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့်စွန်ပလွံပင်သို့မဟုတ်ကိုကိုးကဲ့သို့သောပြingredientsနာရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပြီးသူတို့၏လက်များကိုညစ်ပတ်စေပြီးအတားအဆီးများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ အဓိကအချက် - စတင်ကျူးလွန်ခြင်း၊ သင်၏ပန်းတိုင်များကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားပြီးသင်၏အောင်မြင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားပါ။
: ဒါကဘာလဲ သင်အရင်းအမြစ်မှရရှိသောဒေသများအားလုံး၌တွေ့မြင်ခဲ့ရသောစိန်ခေါ်မှုလား
: ကမ္ဘာ့တောင်ပိုင်းရှိအသေးစားလယ်သမားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကကုန်သွယ်ဖက်များဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ကျွေးမွေးရန်အလားအလာရှိသော်လည်းအထွက်နှုန်းမှာယေဘုယျအားဖြင့်နည်းပါးသည်။ များစွာသောလူသည်စိုက်ပျိုးရေးဓာတုပစ္စည်းများကိုမြေဆီလွှာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောနည်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ယဉ်ကျေးမှုပေါ်မူတည်။ တစ် ဦး မှအကူးအပြောင်းပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောစိုက်ပျိုးရေး - ဂေဟဗေဒသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်သည့်အော်ဂဲနစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးပုံစံသည်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသင်တန်းပေးခြင်းအတွက်ရန်ပုံငွေလိုအပ်သည်။ အစိုးရတိုးချဲ့ပညာပေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်များသောအားဖြင့်ယင်းကိုမပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးအခြေအနေများတိုးတက်လာချိန်တွင် ပို၍ ကြီးမားသောပျော်ရွှင်မှုရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဒေသခံမိတ်ဖက်များရှာဖွေခြင်းသည်မည်သည့်စီမံကိန်းအတွက်မဆိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်မျှမတူညီပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမြောက်ကိုရီးယားမှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စျေး ၀ ယ်လိုသူများအနေဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စိုက်ပျိုးရန်၊ ။ သူတို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မည်သည့်နေရာမှလာကြောင်းနှင့်သူတို့“ ပတ် ၀ န်းကျင်” ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုရှာဖွေရန်။ ကျနော်တို့အဘယ်သူ၏ထုတ်ကုန်ကျော်လွန်ပြီး, ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဝေးပြီးသားဖြစ်ကြသည်ဒေါက်တာ Bronner ၏လိုအပ်ချက်များ။ သစ်သီးဝလံများ၊ အုန်းသီးထုတ်ကုန်များ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ကိုကိုးများထုတ်လုပ်သည်။ ဤယဉ်ကျေးမှုများသည်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသောကြောင့်ပီလောပီနံ၊ နနွင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်မြောက်ကိုရီးယားနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးများတိုးတက်လာခြင်း။ North-South လင့်ခ်လုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမရှိပါ။ ဒေါက်တာ Bronner ၏ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထောက်ပံ့တစ်ခုတည်းသောအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်အီးယူတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မဟာမိတ်များရှိသည်။ ဤအယူအဆသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ဤလှုပ်ရှားမှု၏တက်ကြွ။ လေးစားဖွယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်။
: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသည် Dr. Bronner လိုပဲပန်းတိုင်တစ်ခုထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါသလား။
Leson : ငါထင်တာကတော့ငွေလိုနေတာပဲ။ လူအများစုအတွက်ပန်းတိုင်တစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကလုပ်သည်ပိုပြီးသာယာသောနှင့်ကျေနပ်စရာအလုပ်။ ငါသို့သော်လက်တွေ့ပါပဲ ကုမ္ပဏီအတော်များများသည်သူတို့၏ပြည်သူအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုရရှိရန်ရုန်းကန်ကြရလိမ့်မည်။ သို့သော်အမြော်အမြင်မရှိသောကုမ္ပဏီများအတွက်ပင်နေရာများစွာရှိသည်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားမျှတပြီးထောက်ခံပါ၊ သင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူရိုးသားပါ၊ သင်အလုပ်လုပ်သောရပ်ရွာကိုထောက်ပံ့ပါ။ မြောက်ကိုးရီးယားရှိအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံး၏ ၁၀% သည် Dr. Bronner ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့သတိရှိခဲ့ပါကပိုမိုကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်များ၊ သူတို့၏စီးပွားရေးချည်နှောင်မှုအပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများပေးသည့်အရေးပါသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အခြားသူများ။
2021-04-12 14:56:51 | စီးပွားရေးသမား...
ချိန်ခွင်၏မေးခွန်းတစ်ခု - အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး u.k. ကောင်းကင်တမန်များ၏ပြည်ထောင်စုအဆိုပါ foundresses အာရုံစိုက်
2021-04-12 14:12:42 | စီးပွားရေးသမား...
Angel Academe သည်အမျိုးသမီးများအားကောင်းကင်တမန်များဖြစ်လာစေရန်အားပေးသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တည်ထောင်သူ Sarah Turner သည် Trevor Clawson အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဟန့်အတားများကိုမည်သို့ကျော်လွှားရမည်နှင့်အမျိုးသမီးများကောင်းကင်တမန်များတိုးပွားလာခြင်းသည...
ဘယ်လို ၂၄ နာရီထုတ်လွှင့်မှုကမီဒီယာကိုအပြည့်အ ၀ လာနိုင်ခဲ့တယ်
2021-04-12 08:06:04 | စီးပွားရေးသမား...
2021-04-12 05:28:38 | စီးပွားရေးသမား...
Startup Kanarys သည်မကြာသေးမီကကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသော FUTURE အုပ်စုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီ ၁၅ ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သစ်စီးပွားရေးမှာလုပ်သားတွေအတွက်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်များကိုမြှင့်တင်ရန်န...
2021-04-12 01:20:40 | စီးပွားရေးသမား...
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သောဂျိတ်ဂျုံးစ်နှင့်ဂျိမ်းစ်တာဘော့တို့သည် Oxfordshire ရှိသူတို့၏နေအိမ်မှမုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီကနေ့မှာသူတို့အောင်မြင်တဲ့မုန့်ဖိုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်။ နောက်ထပ်အများအပြားထပ်ဖွင့်ပြီးကိုယ်ပိုင်ကိတ်မုန့်ကျောင်းဖွင့်မယ်။...
2021-04-11 18:37:40 | စီးပွားရေးသမား...
2021-04-11 12:47:27 | စီးပွားရေးသမား...
2021-04-11 07:20:55 | စီးပွားရေးသမား...
US Impact Investing Alliance နှင့် B Lab မှ ဦး ဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ကျော်၏ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွင်အိမ်ဖြူတော်၏ပဏာမခြေလှမ်းကိုဖန်တီးရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ကြီးထွားမှု။...
2021-04-10 20:30:15 | စီးပွားရေးသမား...
ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်း (၉) ခု (သူတို့ကိုယ်တိုင်မယူပါ)
2021-04-10 06:41:30 | စီးပွားရေးသမား...
Retention ဂိမ်းဘယ်လိုအနိုင်ရမလဲ: lingopy နှင့်အတူဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု
2021-04-10 06:24:43 | စီးပွားရေးသမား...
သင်၏အသင်းကို Covid 2021 ပြီးနောက်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာတွေ့နိုင်ရန်အတွက်အချက် ၅ ချက်
2021-04-09 21:36:36 | စီးပွားရေးသမား...
ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ကြိုးစားနေသည်။...
လုံခြုံရေး: stanley နှင့်အတူအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း
2021-04-07 10:57:17 | စီးပွားရေးသမား...
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါစေလုံခြုံရေးသည်ဘယ်သောအခါမျှသေးငယ်သည်၊ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးသောလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များ - ညအချိန်တွင်အနားယူရန်လွယ်ကူသော - မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုအမြဲတမ်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတကွလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြေအနေ...
နာမည်ကြီးတက်တူးထိုးတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းစွန့် ဦး တီထွင်သူတိုင်းဘာတွေသင်ယူနိုင်မလဲ
2021-04-07 04:52:54 | စီးပွားရေးသမား...
ဘဏ္crowdာငွေရှာဖွေခြင်းကိုဒီမိုကရေစီသို့ပြောင်းလဲပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုများပြားအောင်လုပ်နိုင်သလား။ wefunder သည်လုပ်ငန်းငယ်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအာရုံစိုက်သည်
2021-04-06 12:26:28 | စီးပွားရေးသမား...
Wefunder သည် IPO မတိုင်မီဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစားနှင့်ငယ်ရွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်လူနည်းစုရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်ဤအစောပိုင်းနှင့်ရပ်ရွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပ...